Paste – Fish Sauce Recipe | Colourful Recipes | Page 2
Category Paste – Fish Sauce Recipe
Okra ( Lady Finger )
Lady finger fish sauce
Coriander leave – 1 hand full
Fish sauce –7tbsp
ငပိရည် နဲ့ တို့စရာ ရုံပတေသီးပြုပ် ကို ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဟင်းကို ကြိုက်လိမ့်မယ်။
ရုံပတေသီး တပေါင်ကို $4…
0.5 lb = $ 2.03 ( ပေါင် ၀က်ကို $2)
ကြက်သွန်ဖြူ = ၃ မွှာ
ကြက်သွန်နီ = တခြမ်း
ခရမ်းချဉ်သီး = ၁ လုံး
ငရုတ်သီးစိမ်း = ၅တောင့်
နံနံပင် = လက်တဆုပ်စာ
ရုံပတေသီး = 0.5 lb
ငံပြာရည် = ထမင်းစားဇွန်း ၇ ဇွန်း
နံနံပင် = အနည်းငယ်
ဆနွင်းမှုန့် = လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၃ ပုံ ၁ ပုံ
ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆီ = ဆန်ချိန်ခွက် တ၀က်
ရေ = ဆန်ချိန်ခွက် ၁ ခွက်
ကြက်သွန်ဖြူ = ၃ မွှာ၊ ကြက်သွန်နီ = တခြမ်းကို ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ထားပါ။
ခရမ်းချဉ်သီး အလုံးသေး တလုံးကို = ရှစ်စိတ်ခြမ်း
ငရုတ်သီးစိမ်း ငါးတောင့်ကို ထက်ခြမ်းခွဲ
နံနံပင်ကို ပါးပါး ရိတ်ရိတ် လှီးထားပါ။
ဆီ ခွက် တ၀က်လောက် ထည့်ပါ။
ဆီပူ ပီ ဆိုတာနဲ့ ကြိတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ ထည့် ဆီသတ်။
( တအောင့် အကြာမှာ ) ဆနွင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့် ထည့်မွှေ ….
ငရုတ်သီးစိမ်း ထက်ခြမ်းခွဲ ထည့်၊
ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၇ ဇွန်းလောက်ထည့် ပီးမွှေ …
ခရမ်းချဉ်သီးဖတ်များနှင့် ကြက်သွန်ဖတ်များ နူးသွားအောင် ဇွန်းဖြင့် ချေပီးမွှေပါ …
ရေကို ဆန်ချိန်ခွက် တ ခွက်စာ ထည့် မွှေ…
တအောင့် အကြာမှာ လက်မ၀က် စိတ်ထားတဲ့ ရုံပတေသီး ထည့်မွှေ …
နံနံပင် အုပ်ပီး မီး အရှိန် လျှော့ပီး ချက်ရင် ဆီကျန် ရေကျန် ရုံပတေသီး ငံပြာရည်ချက် ကို ရပါပီ။
အရသာ ခပ်လေးလေး စားချင်ရင် ဆားလေး မဆိုစလောက် …. နည်းနည်းလောက် ဖြူးလိုက်ရင် ပြည့်စုံတဲ့ ရုံပတေသီး ငံပြာရည်ချက်ကို ရပါပီ။
By Thet Nandar • Posted in Cooking Ingredients, Paste - Fish Sauce Recipe, Thiriyatanar's Special, Vegetable Recipe	• Tagged food